Nhau - Basic Ruzivo rweKutakura
Iwe unoziva here kuti ndeapi mamishini zvikamu mabheyari ari? Ivo vanonzi "chikafu chemuchina indasitiri" uye anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzakakosha dzemuchina. Nekuti izvi zvakakosha zvikamu zvinoshanda munzvimbo isingaonekwe, kazhinji hazvinzwisiswe nevasiri nyanzvi. Vazhinji vasiri michina nyanzvi havazivi kuti chii mabheyari.
Chii chinonzi kutakura?
Kudzidziswa chikamu chinobatsira kutenderera kwechinhu, chinozivikanwa muchiJapanese sejikuke.Sezita zvarinoreva, kutakura ndicho chikamu chinotsigira "shaft" inotenderera mumushini.
Makina anoshandisa mabheyaringi anosanganisira mota, ndege, magenereta uye zvichingodaro.Bhearings anoshandiswawo mumidziyo yemumba yakadai semafriji, machina ekutsvaira uye maac ...
Mune michina iyi, mabheyaringi anotsigira "shaft" ane mavhiri akasungirirwa, magiya, turbines, ma rotor uye zvimwe zvikamu kuti ibatsire kutenderera mushe.
Semhedzisiro yemachina akasiyana kuti ashandise yakawanda "shaft" inotenderera, saka kutakura kwave zvikamu zvakakosha, zvinozivikanwa se "michina indasitiri chikafu." Chikamu ichi chingaite senge chisina basa, asi chakakosha. Pasina icho, tinogona ' rarama hupenyu hwakajairika.
Deredza kukakavara uye ita kuti kutenderera kuve kwakasimba
Panofanira kuva nekupesana pakati pe "shaft" inotenderera uye nhengo inotsigira inotenderera. Mabheyari anoshandiswa pakati pe "shaft" inotenderera uye chikamu chekutsigira chinotenderera.
Mabheyaringi anogona kudzikisira kukweshera, kuita kutenderera kuve kwakagadzikana uye kudzikisira kushandiswa kwesimba. Iri ndiro basa hombe rekutakura.
Chengetedza zvikamu zvekutsigira zvinotenderera uye chengeta iyo "axis" inotenderera munzvimbo chaiyo
Pane simba guru pakati pe "shaft" inotenderera uye chikamu chekutsigira chinotenderera. Kutakura kwacho kunodzivirira nhengo inotsigirana inotenderera kubva mukukuvadzwa nesimba iri uye nekuchengetedza "shaft" inotenderera munzvimbo kwayo
Izvo chaizvo nekuda kwemabasa aya ekutakura kuti tinogona kushandisa zvakare muchina uyu kwenguva yakareba.